हाम्रो उपचार महँगो छैन – नेपाल मेडिसिटी – Your1click
ललितपुरको नख्खुमा नेपालकै ठूलो अस्पताल नेपाल मेडिसिटी संचालनमा आएको डेढ महिना भयो।
गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक डाक्टर उपेन्द्र महतोको लगानीमा संचालनमा आएको अस्पताल ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
३० रोपनी क्षेत्रफलमा आधुनिक भवन छ। अस्पताल संचालनमा आएसँगै विरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ।
हाल ओपिडीमा दैनिक २ सयभन्दा बढी बिरामी आउने गरेको अस्पतालका मार्केटिङ एक्ज्युकेटिभ सञ्जय त्रिपाठीले जानकारी दिए।
उपचार गर्न धेरै नेपाली भारतको दिल्ली र थाइल्याण्डको बैंकक जान बाध्य भएपछि स्वदेशमा नै सुविधासम्पन्न अस्पताल किन नखोल्ने भनेर महतोले अर्बौको लगानीमा अस्पताल संचालनमा ल्याएका हुन् ।
मेडिसिटी अस्पतालमा अनुभवी डाक्टरहरु रहेको त्रिपाठीले बताए।
‘उपचारका लागि विदेसिने रकम अब स्वदेशमै रहन्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि तथा उपकरणबाट हामीले सेवा दिन थालेकाले ‘विदेशमा जाने, बस्ने थप खर्च व्यहोर्न नपर्ने उनले बताए।
अस्पतालले एनएबिएच (नेसनल एक्रेडिएसन बोर्ड अफ हस्पिटल एण्ड हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स) बाट सम्वन्धन लिने जनाएको छ।
एनएबिएचका प्रतिनिधी आएर अध्ययन गरेर गइसकेको र यसबाटै चाँडै नै सम्वन्धन प्राप्त हुने इन्टरनेसनल प्यासेन्ट सर्भिसका तेन्जिङ बज्राचार्यले जानकारी दिए।
‘यो एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सम्वन्धन हो, जुन हालसम्म नेपालका कुनै पनि अस्पतालले लिएका छैनन्, चाँडै हामीले पाउँदैछौँ’ उनले भने।
यहाँका डाक्टर तथा चिकित्सकहरु अस्पतालमा पुर्णकालिन रुपमा अाबद्ध भइ कार्यरत भएकाले बिरामीहरुले उत्कृष्ट सेवा र सुविधा पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
त्यति मात्रै नभई बिरामीका जटिल समस्यामा डाक्टरहरुको छलफलबाटै समाधान गरिने उनले बताए। अस्पतालले स्वदेशीलाई मात्रै नभई विदेशीलाई समेत प्रभावकारी रुपमा सेवा दिने लक्ष्य लिएको छ।
‘पर्यटकलाई भाषा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि तथा सेवामा कुनै कमी रहँदैन, स्वास्थ्य पर्यटनको समेत विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो’ उनले भने।
‘बाहिरबाट भवन हेर्दा, निकै महँगो छ भन्ने अनुमान हुन सक्ला, तर हाम्रो सेवा महँगो छैन, ओपिडीको टिकट शुल्क ५ सय रुपैयाँ छ।’
हाल ३०० शैयामा संचालनमा रहेको अस्पतालले यसलाई बढाएर ७५० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अस्पतालले हेलिकप्टरबाट आउने इमर्जेन्सी बिरामीका लागि लक्षित गर्दै दुई हेलिप्याड बनाएको छ।
अस्पतालको भवनमाथि एक र तल अर्को एक हेलिप्याड संचालनमा आइसकेको बज्राचार्यले जानकारी दिए।
बरिष्ठ सर्जन प्राध्यापक डाक्टर सुनिलकुमार शर्मा ढकाल यस अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर रहेका छन् । उनी यस अघि नेपाल मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल थिए ।
दुर्गम क्षेत्रबाट पनि विरामीहरु उद्धार गर्नका लागि यस अस्पतालको इर्मजेन्सी रेस्क्यु टिम सदैव तत्पर छ ।
यस टिमले उद्धार गरेर विरामीहरुलाई अन्य अस्पतालमा पुर्याउने सेवा पनि प्रदान गर्दछ। वरिष्ठ आकस्मिक उद्धार सेवामा डाक्टर संजय कार्कीको टीम २४ सै घन्टा उपलब्ध छ।
मेडिसिटीले एक अस्पताल एक डाक्टर भन्ने नीति अपनाएको छ। साथै डाक्टरहरुको सामुहिक छलफलद्वारा विरामीलाई उत्कृष्ट उपचार, सेवा तथा परामर्श दिइन्छ।
यस अस्पतालले बोनम्यारो, मृगौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणसम्मका सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । एमआरआई,प्याथोलोजी ल्याव, सिटी स्क्यान, एक्माे, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउण्ड साथै अत्याधुनिक मोडुलर अप्रेसन थ्रिएटर र ब्लड बैंक अस्पतालमा छन्।
अस्पतालमा तीन टेस्लाको सिमेन्स स्काइरा एमअारअाइ मेसिन छ । यो नेपालमा पहिलो पटक अाफूहरुले भित्र्याएको अस्पतालकाे दाबी छ। यो सँगै जिम्मर फिजियोथेरापी उपकरण पनि अस्पतालमा छ।
रेडियोलोजी विभागका प्रमुख प्रा.डा. रामकुमार घिमिरेले यस अस्पतालमा इमेजीङ्ग सम्बन्धि सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेको जानकारी दिए। यस सँगसँगै उनले अस्पतालमा इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी सम्बन्धी सुविधाहरु पनि उपलब्ध रहेको बताए।
घिमिरे यसअघि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा रेडियोलाेजी प्रमुख थिए।
अस्पतालको ल्यावमा अत्याधुनिक उपकरण र सामग्रीहरु छन् । यसका साथै अस्पतालमा क्यान्सर रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने इमिनो विश्वस्तरीय इम्युनोहिस्टोकेमेस्ट्री उपकरण पनि उपलब्ध रहेको अस्पतालका प्याथाेलोजी विभागका प्रमुख प्रा.डा. गोपी अर्यालले बताए।
अस्पतालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट छोटाे समयमा नै ग्रेड ए को सर्टिफिकेट पाएको छ । ग्रेड ए को सर्टिफिकेट पाउने पहिलो अस्पताल रहेको मेडिसिटीले दाबी गरेको छ।
← सोह्र डाक्टरको काम एक्ला प्रभुले भ्याउँदै
इलाममा एक्काइस हजारको स्वास्थ्य बीमा →